တာမွေ ဆန္ဒပြပွဲ ဖမ်းဆီးခံရမှု၌ မီဒီယာများ ပါခဲ့ရင် ပြန်လွှတ်ပေးရန် ပြောဆိုခဲ့ဟု ဦးဇော်ဌေး ဆု? - Yangon Media Group
တာမွေ ဆန္ဒပြပွဲ ဖမ်းဆီးခံရမှု၌ မီဒီယာများ ပါခဲ့ရင် ပြန်လွှတ်ပေးရန် ပြောဆိုခဲ့ဟု ဦးဇော်ဌေး ဆု?
ဆန္ဒပြသူများအနေဖြင့် ဥပဒေနှင့်အညီ ဆန္ဒပြရန် လိုအပ်ကြောင်း နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော် ဌေးက ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့ တာမွေအဝိုင်းထိပ်တွင် စစ်ပွဲများ ရပ်တန့်ရန် ဆန္ဒပြတောင်းဆိုရာ၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်တိုင်းမ်ဂျာနယ်မှ မေးမြန်းရာတွင် ”ဆန္ဒပြခွင့်ရှိပါတယ်။ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့အညီ ဆန္ဒပြဖို့လိုတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဒီမိုကရေစီကို သွား နေတယ်။ လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်ရှိတယ်။ တစ်ဖက်က အခွင့်အရေးကိုယူသင့်တယ်၊ ရဖို့လိုတယ်။ အခွင့်အရေးရတဲ့အခါမှာ တစ်ဖက်ကလဲ လိုက်နာရမယ့်တာဝန်တွေရှိတယ်။ လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်၊ ပြချင်တိုင်းပြ လုပ် နေမယ်ဆိုရင် အများပြည်သူ သွားလာမှု ထိခိုက်လာမယ်၊ အများပြည်သူ အနှောင့်အယှက် ဖြစ်တာတွေဖြစ်ရင်၊ မဖြစ်အောင်လို့ အာဏာ ပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေက ဆောင်ရွက်ရတာတွေ ရှိတယ်။ အဲဒါတွေသည် ခွင့်ပြုချက်ရသလား၊ ခွင့်ပြုထားသလား၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ထားသလား၊ ဒီအချက်က အရေးကြီးပါတယ်”ဟု ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများအနေ ဖြင့် အခြေအနေနှင့် အချိန်အခါကိုကြည့်၍ ဆန္ဒထုတ်ဖော်သင့်ကြောင်းလည်း ၎င်းက ထပ်မံပြောကြားသည်။ ”သူတို့ဆန္ဒပြတဲ့နေ့မှာပဲ မူဆယ်မှာ အရပ်သားတွေ သေတယ်။ ပြည်သူလူထုက အဲဒီအပေါ်မှာ အမျက်ရှိနေတာတွေရှိတယ်။ ဆန္ဒပြပွဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာ တန်ပြန်အဖွဲ့တွေ ရှိတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့က ဟိုဖက်မှာလဲထိန်းတယ်၊ ဒီဖက်မှာလဲ ထိန်းတယ်။ အဲဒီမှာ အများပြည်သူက ဆဲတာဆိုတာတွေ၊ လမ်းပိတ်လို့ဆိုတာ တွေ ဖြစ်လာတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့က အဲဒီအပေါ်မှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ တာဝန်ရှိရဲတပ်ဖွဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က ဆုံး ဖြတ်ပြီးတော့ လုပ်လိုက်တယ်လို့ ပြောတယ်။ အကယ်၍ အဲဒီလိုထိန်းတာမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုရင် ညမှောင်သွားရင် လူအုပ်စုတွေနဲ့ ရိုက်ပွဲ၊ နှက်ပွဲတွေ ဖြစ်လာရင် ပိုဆိုးမယ်”ဟု ဦးဇော် ဌေးကဆက်လက်ပြောဆိုသည်။ ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ မီဒီယာများ ရှုပ်ထွေးနေပြီး မည်သူသည် မည်သည့်နေရာသို့ ပါသွားပြီဟု ကြားသိရသည့်အတွက် တာဝန်ရှိသူများထံသို့ မီဒီယာများ ပါရှိခဲ့ပါက ပြန်လည်လွှတ်ပေးရန် ပြောဆိုခဲ့ ကြောင်းလည်းသိရသည်။
”မီဒီယာတွေပါလား၊ ပါရင် ပြန်လွှတ်ပေးပါလို့ ကျွန်တော်တို့က ပြောတဲ့အခါ မီဒီယာတစ်ယောက်မှမပါဘူး။ ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးဖြစ်တဲ့အခါမှာ ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ အဓိကက ပြဿနာဖန်တီးချင်တာလား၊ ဆန္ဒပြချင်တာလား။ အခုက ပြဿနာမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ် နေတဲ့အခါကျရင် တည်ငြိမ်မှုကို ထိခိုက်အောင်တမင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပေါ့နော်။ လုပ်နေသလားဆိုတဲ့ ဝေဖန်ချက်တွေလဲ ပေါ်လာတယ်။ အဲဒါက ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေအတွက် မကောင်းဘူး။ ကိုယ်လိုချင်တာကဘာလဲ၊ ကိုယ်လုပ်ချင်တာက ဘာလဲ၊ တကယ့် နိုင်ငံတော်ကသွားနေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး Process ကို အထောက်အကူပြု အောင် လုပ်ချင်တာလား၊ ဒါမျိုးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်”ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားသူများက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖြစ်ပွားနေသော စစ်ပွဲများ ရပ်တန့် ရေးနှင့် စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူများအား လွတ်လပ်စွာကူညီထောက်ပံ့ခွင့်ရရှိရေး မေ ၁၂ ရက်က ငြိမ်းချမ်းရေးလူထုလှုပ်ရှားမှု ချီတက်လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ တာမွေအဝိုင်းထိပ်ရှိ Ocean စင်တာရှေ့မှ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံအထိ ပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း တာမွေအဝိုင်းထိပ်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖြိုခွင်းဖမ်းဆီးရာ တစ်နာရီခန့်အကြာ ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ရွှေတိဂုံစေတီမှ ရရှိသည့် အလှူငွေ ဘီလီယံ ၆၇ သိန်းကျော်ရှိပြီး ပြန်လည်သုံးစွဲမှု အခြေအနေအား တိ
ယာယာတိုရေးကို ခေါ်နိုင်မည့် အခွင့်အရေးကို ဝက်စ်ဟမ်း ငြင်းပယ်ခဲ့
အခွံမာသီး စားသုံးခြင်းက သုက်ပိုး အရည်အသွေးကို တိုးတက်စေနိုင်
”ဒါရိုက်တာ လုပ်ရင်လည်း ဒါရိုက်တာ စိတ်မွေးတယ်။ သရုပ်ဆောင် လုပ်ရင်လည်း သရုပ်ဆောင် စိတ်ပဲ မွေ??